Imithombo yeendaba yeNtlalontle ephawulwe kumava abaThengi | Martech Zone
Xa amashishini aqala ukungena kwilizwe losasazo lwasentlalweni, lalisetyenziswa njengeqonga lokuthengisa imveliso yabo kunye nokunyusa ukuthengisa. Kule minyaka imbalwa idlulileyo, nangona kunjalo, imithombo yeendaba zentlalo ziye zangena kumgangatho othandwayo woluntu oluku-intanethi-indawo yokunxibelelana neempawu abazithandayo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, kukufuna uncedo xa benemicimbi.
Abathengi abaninzi kunakuqala bajonge ukunxibelelana nemveliso ngeendaba zosasazo zasekuhlaleni, kwaye inkampani yakho ayizokwazi ukukhuphisana ukuba awungeni ndawo. Yonke imicimbi yokunxibelelana, kwaye ukungahoyi abathengi ayisiyonto inokukhetha - ukwenza njalo kuya kuba ifuthe elibi kumava abathengi, kwaye emva koko, wenzakalise umgca wakho osezantsi.
Ngaba uyazi ukuba kutheni abathengi beyithanda kakhulu imidiya yoluntu? Inika ukubanakho ukubuza imibuzo kwaye ishiye ingxelo kwiforum yoluntu apho impendulo yakho ibonakalisiwe kubo bonke ukuba babone- kwaye ndikholelwe, abanye abathengi bajonge kufutshane. A funda kwiConversocial ifumanise ukuba i-88% yabathengi kunqabile ukuba bathenge kwi-brand engaphenduliyo kwizikhalazo zabathengi kumajelo onxibelelwano. Ngokusisiseko, indlela onxibelelana ngayo nabathengi bakho ithathelwa ingqalelo ngabathengi abanokubakho.
Abathengi namhlanje baqhele ukufumana iimpendulo kwangoko. Xa abathengi bebuza imibuzo kwimidiya yoluntu, balindele ukuba ubuyele kubo ngokukhawuleza ngesisombululo. Inyaniso, I-42% yabathengi ilindele impendulo kungaphelanga iyure, nge 32% engaphezulu elindele ukuba ixesha libe phakathi kwimizuzu engama-30. Ukubeka nje, kuya kufuneka ube neminwe yakho ekubetheni ngalo lonke ixesha ngokujonga esweni iiakhawunti zemidiya yoluntu ukuze ubone iikhomenti kunye nemibuzo njengoko ingena.
Ukuba ufumana uphawu lwakho phakathi kwengxaki yemidiya yoluntu, kuya kufuneka ubenombandela obuzwayo kwaye unike isisombululo ngokukhawuleza. Ukuba wena (okanye abasebenzi bakho) aninakho ukubonelela ngesisombululo kwangoko, qinisekisa umthengi ukuba uyasebenza kuyo kwaye ulandelele ngokukhawuleza xa uphendula. Into yokugqibela ofuna ukuyenza ngumceli mngeni kumonde wabathengi bakho ngokubabhengeza okanye ungabahoyi kwaphela- oko kunokuba neziphumo ezibi.
Kwiintsuku ngaphambi kweendaba zosasazo, abathengi banokwabelana ngamava okuthenga angalunganga kunye namalungu osapho ambalwa, abahlobo abasondeleyo kunye nabantu abasebenza nabo. Kwiinkampani, eli yayinombolo enokulawulwa ukujongana nayo. Nangona kunjalo, ngokufika kukaFacebook noTwitter, abathengi abanomsindo banenani elibonakala lingenasiphelo labantu lokufumana amabali ngeenkonzo ezothusayo zabathengi kunye neemveliso ezingathandekiyo.
Iinkcukacha-manani ezijikeleze le nto intsha ayisiyonto yokuthimla:
I-45% yabathengi babelana ngamava amabi enkonzo yabathengi kusetyenziswa imidiya yoluntu (Uphando lwendalo )
I-71% yabathengi abanamava okuphendula ngokukhawuleza nangokufanelekileyo kwimidiya yoluntu banokuthi bacebise olo phawu kwabanye, xa kuthelekiswa ne-19% yabathengi abangafumani mpendulo. (Ukukhuthaza iNM)
Abantu abangama-88% bathemba uphononongo olukwi-Intanethi olubhalwe ngabanye abathengi njengoko bezithemba iingcebiso ezivela kubafowunelwa babucala. (BrightLocal)
Xa iinkampani zibandakanya kwaye ziphendula kwizicelo zenkonzo yabathengi kwimithombo yeendaba zentlalo, abo bathengi baphela bechitha iipesenti ezingama-20 ukuya kuma-40% ngaphezulu kwinkampani. (I-Bain kunye neNkampani)
I-85% yabalandeli beemveliso kwi-Facebook bacebisa ezo brand kwabanye (Ungqamaniso)
Abathengi banama-71% ngakumbi amathuba okuba bathenge ngokusekwe kwimithombo yeendaba ezithunyelwayo (Hubspot)
Abathengi bakho banokufikelela ngakumbi kunye nefuthe kunanini na ngaphambili, kwaye yeyona nto inomdla kwinkampani yakho ukubagcina bonwabile ngokuzibandakanya nabo kwimidiya yoluntu ngokukhawuleza kwaye rhoqo rhoqo.
Ungawaphucula kakhulu amava abathengi ngokuzibandakanya ekwakheni ubudlelwane kumajelo eendaba ezentlalo. Abathengi bakho bahlala bethenga izigqibo kwiimvakalelo, endaweni yokuqiqa- kwaye akukho ndawo inokunxibelelana nabantu ekuphuhliseni unxibelelwano lweemvakalelo.
Ungaluqinisa unxibelelwano lweemvakalelo kwaye ufumane umda kukhuphiswano lwakho ngokuqinisekisa ukuba abathengi bakho bayazi ukuba bayabonwa kwaye bayathandwa.
Phendula ngokukhawuleza kwimiyalezo yabo.
Fikelela kwaye ubulele abantu ngabanye xa bebeka izimvo okanye babelana ngezithuba zakho.
Thumela inqaku lombulelo kwimidiya yoluntu xa bethenga.
Nika isaphulelo kwizinto abazithandayo.
Ngokwe-Market Force, Ukugxininisa kumava abathengi kubangela ukoneliseka okuphezulu kunye namaxesha ama-2-12 amanqanaba aphezulu ezincomo - zozibini ezinokuba nefuthe elikhulu ekunyanisekeni kwabathengi nakwingeniso. Xa usebenzisa imithombo yeendaba yoluntu ngokuchanekileyo, iya kuba nefuthe elihle kumava abathengi- kwaye ngubani owaziyo, ungagcina ujika abathengi abonwabileyo baba ngabathetheli bophawu.
tags: Inkonzo embi kubathengiibhayinyeyiphieyobeamava kumakhasimendeInkonzo eyenzelweuxhaso lwabathengiuphando lwentoimvakaleloabasebenzihubspotukuchukumisa komntuindawo yokusebenzisanaezentengisonm ukukhuthazaisigqibo sokuthengafi keleleImidiya yokuncokolaumphefumlo weempawuinkxasozendesk
Oko Sikufundileyo malunga nokuFunyanwa kwabaThengi ngokuSwinga iiNgcingo
Iminyaka eli-100 kamva: uBukumkani boMbhalisi
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2016 ngo-9: 55 AM
Esinye sezibonelelo ezinkulu zosasazo lwentlalo kwishishini kukusebenzisa ukwandisa ukugcwala kwiwebhusayithi yakho. Ayisiyo kuphela imithombo yeendaba ekuncedeni ukuba ubalathise abantu kwiwebhusayithi yakho, kodwa ngokwabelana ngamajelo eendaba ezentlalo owafumanayo, isikhundla sakho sokukhangela siya kuba siphezulu.
Ngomhla wama-21 ku-Disemba 2016 ngo-1: 22 PM
Ngqo, yinyani… kodwa uGoogle utshilo ngaphambili ukuba ayisebenzisi ukwabelana ngokwasentlalweni ngokuthe ngqo ukumisela inqanaba. Ngokungangqalanga, ukwabelana ngomxholo wakho ekuhlaleni kuhlala kwenza abanye abantu ukuba babelane kwaye bathethe ngawo. Xa ezo makhonkco afanelekileyo afumana indlela eya kwiindawo ezifanelekileyo, kuyanceda ukubeka inqanaba.